‘पोइ पर्‍यो काले’को पोस्टरमा को कसको पोइ ?
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन फिल्मी‘पोइ पर्‍यो काले’को पोस्टरमा को कसको पोइ ?
विराटनगर, १४ असोज । ‘पोइ पर्‍यो काले’को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गरिएको पोस्टरले दर्शकहरूलाई अझै कन्फ्युज पारेको छ । फिल्मको प्रचार गर्ने क्रममा केही दिनयता फिल्मको निर्माण टिमले लगातार नयाँ पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेको छ । फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री पूजा शर्मा र श्रृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरिएको फिल्मको शीर्ष गीतमा पूजाको जोडी सौगात र आकाशको जोडी सृष्टिलाई देखाइएको थियो । सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा भने को कसको जोडी भनेर दर्शकहरूरुलाई निर्माण टिमले कन्फ्युज पार्न खोजेको देखिन्छ । सौगातकै वरिपरि मूल कथा घुम्ने फिल्ममा कसले कसको श्रीमान्–श्रीमतीको भूमिका निभाएको भन्ने कुरालाई सस्पेन्समा राखिएको छ ।
फिल्मको मुख्य ट्विस्ट नै यही रहेको र फिल्म हेरेपछि मात्र दर्शकले यसको जवाफ पाउने फिल्मका निर्देशक शिशीर राणाले बताएका छन् । फिल्ममा यी ४ मुख्य कलाकारका साथै सोहित मानन्धर, राजाराम पौडेल, बिन्दा खतिवडा, जयनन्द लामालगायतका कलाकारहरूरुको पनि अभिनय रहेको छ ।
निर्देशक शिशिरले लेखेको कमेडी कथावस्तुमा आधारित रहेर निर्माण भएको फिल्मलाई शिव ढकालले छायांकन गरेका हुन् । श्यामबहादुर थापा प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा दिपक मनाङ्गे, रघु परियार र किरण नेपालीले संयुक्त रूरुपमा लगानी गरेर फिल्मलाई निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा पुरुषोत्तम न्यौपाने र शिव गौतमले संगीत दिएका छन् । हिन्दुहरूरुको महान चाड तिहारको अवसर परेर फिल्म आउँदो कात्तिक ८ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।